सागको क्लोज क्याम्पबाटै एकाएक गायव भएकी स्वर्ण बिजेता तुलसा किन उडिन् कतार ? यस्तो रहेछ उनको पिंडादायी कथा -व्यथा ! – " सुलभ खबर "
सागको क्लोज क्याम्पबाटै एकाएक गायव भएकी स्वर्ण बिजेता तुलसा किन उडिन् कतार ? यस्तो रहेछ उनको पिंडादायी कथा -व्यथा !
काठमाडौं, १९ मङ्सिर । १३औँ दक्षिण एशियाली खेलकुद (साग)को क्लोज क्याम्पबाटै मन्दिर जान्छु भनेर एकाएक कतार उडेकी तुलासलाई धेरै गा ली गरे, नकारात्मक टिप्पणी गरे, उनका प्रशिक्षकले मन दुखाए र खेलकुदमन्त्री हाँसे । तर उनले किन त्यसो गरिन् ? भन्ने बारेमा कसैले बुझेनन् र बुझ्न पनि चाहेनन् । यद्यपी उनको भित्रि कथा व्यथा कम पिंददायी छैन, आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।
एथ्लेटिक्सकी राष्ट्रिय खेलाडी तुलसा बन्द प्रशिक्षणमै रहेका बेला त्यो अवसर छोडेर रोजगारीका लागि कतार गएकी हुन् । धेरैले तुलसालाई साग प्रतियोगिता छोडेर देशकै गरिमामा आँच पु९याएको आरोप लगाइरहेका छन् तर घरको अवस्था हेर्दा उनी रहरले नभएर बाध्यताले श्रम गर्न कतार पुगेको देखिन्छ । घरखर्च चलाउन र छोराछोरी पढाउन तुलसाका बुवा भीमबहादुरले १२ वर्षदेखि मलेसियामा पसिना बगाइरहेका छन् । उनी ४५ वर्ष पुगे ।
पाखुराको बलमा कमाउने उमेर पनि सकिनै थाल्यो । तुलसाकी आमा पद्मा मुटुरोगी छिन् । ‘अब तिमीहरुलाई पढाउने र आमाबुवा पाल्ने जिम्मेवारी मेरो काँधमा आएको छ,’ कतार जानु दुई दिनअघि काठमाडौंबाट बहिनी गौरीलाई फोन गरी तुलसाले भनेकी थिइन्, ‘म टाढा हुनेछु, आमाको ख्याल गर्नू ।’ विदेश उडेको दिन मंसिर १३ गते बिहान पनि तुलसाले आमालाई फोन गरिन् । ‘केही दिन सम्पर्क हुँदैन होला,’ छोटो कुराकानीमा तुलसाले भनिन्, ‘आमा, आफ्नो ख्याल गर्नु, केही समस्या परे बहिनीलाई खबर गर्नु।’ भोलिपल्टै उनी साग छोडेर विदेश उडेको खबर आउन थाले । सागको बन्द प्रशिक्षणमा रहेकी तुलसा मन्दीर जान्छु भनेर एकाबिहानै निस्केकी थिइन् । उनी त्यहाँवाट सिधै विमानस्थल पुगेर कतार उडिन् । कतार पुगेपछि प्रशिक्षकलाई खबर गरिन् भविष्य बनाउन कतार पुगें ।